Activities Archives - Mtech
Posted by: mtech | on June 14, 2018
YTU NCSE 2018 Exhibition
ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် NCSE မှ ကြီးမှူး ကျင်းပတဲ့ နည်းပညာပြပွဲတွင် Myo & Moe Technology Co.,Ltd ( M-Tech ) မှ အောက်ပါအချိန်အတိုင်း ၀င်ရောက်ပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှု နိုင်ရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ဒီ ပွဲလေးမှာ M-Tech မှ ELV System နှင့် Smart Home System များ၊ ELV ( Extra Low Voltage System ) , Smart Home Automation System နှင့် သက်ဆိုင်သော Training Program များကို ဦးစားပေးပြသသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် လက်လွတ်မခံသင့်သော ပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း…။ ပြပွဲမှာ ဆုံတွေ့ကြပါစို့နော်..!!!!
21.6.2018 ( ကြာသပတေးနေ့ ) ( 09:00AM to 05:00PM )
22.6.2018 ( သောကြာနေ့ ) ( 09:00AM to 05:00PM )
23.6.2018 ( စနေနေ့) ( 09:00AM to 05:00PM )
Myo & Moe Technology Co.,Ltd ( M-Tech )
Posted in Activities, News | No Comments »
Posted by: mtech | on June 13, 2018
Securiton Fire Alarm System ( Switzerland Brand )
Securiton Fire Alarm System ( Switzerland Brand ) installation at Thilawa… Beam Detector installation လုပ်နေကြတဲ့ M-Tech Engineering Team အားလုံးကျေးဇူးပါ။ Safety First နော် ။ Take Care All !!!!
Posted by: mtech engineer | on February 17, 2018
CCTV လေးတွေဆင်လိုက် ၊Access Control System လေးတွေဆင်လိုက်၊ Intrusion Alarm တွေဆင်လိုက် ၊Video Intercom တွေဆင်လိုက်နဲ့ အဆင်ပြေနေပြီဆိုတော့ နောက်တစ်ဆင့်မြှင့်လိုက်ရအောင်။
Access Control Reader ကို Card လေးပြလိုက်တာနဲ့ CCTV ကနေ ဓါတ်ပုံ auto ရိုက်မယ်။ ဘယ်သူ ဝင်သွားတယ်ဆိုတာကအစ
Software တစ်ခုထဲကနေ အားလုံးကို Monitor and Control လုပ် မယ် ။ Building ပုံ E map တွကတဆင့် Monitor နဲ့ Control လုပ်မယ် ။ Software ကလဲ Free နော် ။ ကဲ ဒီ Solution အကြောင်းလေးတွေ အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Phone လေးသာဆက်လိုက်ပါတော့။
Posted in Activities, Product News | No Comments »